Alexander-Arnold oo si xoogan u amaanay Mohamed Salah kaidb guushii uu gaarsiiyay kulankii Brighton – Gool FM
Alexander-Arnold oo si xoogan u amaanay Mohamed Salah kaidb guushii uu gaarsiiyay kulankii Brighton
(Liverpool) 26 Agoosto 2018. Laacibka kooxda Liverpool Trent Alexander-Arnold ayaa wuxuu xaqiijiyay in Mohamed Salah uu leeyahay faa’iido muhiim ah, isagoo dhinaca kale sheegay inuu awood u leeyahay in wax walba uu ku dhameeyo hal fursad oo kaliya.
Sidoo kale Alexander-Arnold ayaa sheegay in dareenka guusha uusan u dhexeenin wax farqi ah xitaa hadii aad guul ku gaarto 6 gool ama 7 gool ama aad sidoo kale guul ku gaarto 1-0.
“Waxay ku bilaawdeen ciyaarta si adag, waxay isku dayeen inay naga hor istaagaan fursadaha aan sameeneyno, laakiin weerarka xoogan ee aan heysano ayaa inoo sahlay inaan gool dhalino”.
“Mohamed Salah wuxuu xaqiijiyay inuu awood u leeyahay in wax walba uu ku go’aamin karo hal fursad oo kaliya, sida aan ku aragnay kulanka Brighton, waxaa soo martay hal fursad wuxuuna ku dhaliyay gool”.
“Dareenka guusha waa mid aanan isbedelin xitaa haddii aad dhaliso 6 ama 7 gool, ama aad guul ku gaarto 1-0, dareenka malahan wax isbadal ah waa mid qura, kulanka adag ee sidaan oo kale wuxuu u baahan yahay in la qabto shaqo aad u adag”.
“Marka aad guul gaarto kulamada noocaan oo kale waxaad dareemeysaa farxad, sabababtoo ah waxaan dooneynaa inaan xili ciyaareedkan u dagaalano ku guuleysiga koobka Premier League”.
Macalinka Barcelona ee Ernesto Valverde oo caro weyn ka muujiyay garoonka kooxda Valladolid
Yaaqshiid iyo Shangaani oo barbaro isla dhaafi waayay+SAWIRRO